Ọgba ehi dara na nke ya | Martech Zone
Otu ìgwè ehi dina na nke ya
Sunday, November 4, 2007 Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Douglas Karr
Ọdịnaya m dị na saịtị ahụ abụrụla obere izu ụka gara aga - ọ ga - eburu n'isi nso. Anọla m ọtụtụ akwụkwọ na-arụsi ọrụ ike, na-ekwu okwu ma na-arụ ọrụ ọnwa gara aga ma ọ na-emetụta blog. Agbanyeghị na ọdịnaya a dị ala ugbu a, uche m na-agba afọ ojuju maka izu ole na ole sochirinụ, yabụ kpachara anya na mụ na gị. Ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, Emechiela m onye nkwado ikpeazụ maka $ 1,000 Onyinye Efu - Vontoo. Anyị na-arụ ọrụ na ngosi ngosi mara mma nke Vontoo maka ọkwa ahụ!
N’izu a ka m gwụchara Atụrụ, akwụkwọ a Akara Earl. Amaghị m na ejiri m oge nọrọkwuo akwụkwọ na afọ a, ọ bụ ihe ịtụnanya na-agụ ma aga m akwado ya na ahịa ọ bụla.
IMHO, Atụrụ nwere ike enweela oge ịbụ akwụkwọ azụmahịa kachasị mkpa iji gụọ afọ a - belụsọ na echere m na Mark dabara na ụfọdụ echiche ya na nkwubi okwu ya. A kọwara Mark na jaket ka
Otu n'ime ndị ọrụ mgbasa ozi kachasị n'ụwa na onye na - eche echiche banyere ụdị, ịre ahịa na omume ndị ahịa.
N’ịgụ akwụkwọ Mark, ahụrụ m ụfọdụ ihe na-egosi na Mark na-ele okpukpe a haziri ahazi anya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka nri. Ndị a bụ isiokwu abụọ anyị ga - eche iji zere na azụmaahịa, mana isiokwu Mark maka ịgbanwe agwa mmadụ nwere ike ịgwa mmadụ okwu abụọ esiri mee ka ìgwè ehi ya. Kama ịmetụ onye miri emi aka, Mark tụbara okwu di na nwunye ahụ katọrọ ya ma hapụ ya otú ahụ. N'ikwu eziokwu, o siiri m ike igwu akwụkwọ ndị ọzọ n'ihi nke a. Nke ahụ adịghị mma - ma nwee ike ịkọwapụta ihe kpatara m jiri oge dị ukwuu na akwụkwọ ahụ. Mark nwere ọtụtụ ozi dị egwu na m ga-amanye onwe m ịchọ nnukwu ozi ahụ ma leghara agbapụ anya ebe a.
Ọchịchị Ndị Ọchịchị
Nkwubi okwu nke abuo n’akwukwo a bu na ndi mmadu n’enweghi ntukwasi obi (ma o buru na ha abaghi ​​uru). Agbanyeghị, n'otu isi okwu ahụ Mark kwuru, ọ gbara onye 'George chọrọ ịmata ihe' na ntuli aka 2004 nke George Bush meriri. Kọmitii ntuli aka bụ mkpebi dị mma nke ndị nna nna nke mba a chepụtara iji hụ na votu a na-ewu ewu anaghị eme mgbe ọ bụla onye isi ala ma na-ekwu maka nchegbu Mark nwere gbasara omume, ihe egwu na ụgwọ ọrụ metụtara echiche ehi.
Ọ bụrụ na United States nwere ntuli aka a ma ama nke kpebiri onye isi ala, a ga-ahapụ 90% nke United States ebe ndị enyi anyị nọ na Washington nọ na-elebara obodo kachasị ukwuu anya. Electorallọ akwụkwọ ntuli aka na-enye nguzozi nke chọrọ ka gọọmentị anyị payaa ntị na ihe karịrị naanị ndị ka n'ọnụ ọgụgụ… ha kwesịrị ị attentiona ntị na steeti. N'ezie, ntuli aka meriri na Florida na Ohio, mana ewepu kọleji ntuli aka, steeti ndị ahụ agaraghị enwe ọnụ na ntuli aka ahụ.
Ekwenyere m na akwụkwọ Mark gaara arụ ọrụ karịa ma ọ bụrụ na ọ tụlere nguzozi nke ndị ama ama na ndị nnọchi anya ịtụ vootu chọrọ nke United States na otu o si agbakwunye na "American Dream" site n'inye onye ọ bụla ikike ịchụso obi ụtọ, ọ bụghị naanị ihe kachasị ọtụtụ mpaghara.
Ogbugba ozo m choputara na akwukwo a bu nke a rue na njedebe,
anyị maara ugbu a na ụwa dị ka bọọlụ, nke na-abụghị ebe etiti sistemu anyanwụ anyị dị ka theka Romanka na-akuzi once
O doro anya na theka Roman na-akụzi nke ahụ! Ọ bụ nkwenye zuru oke n'oge ahụ ma chọọ ka ekwenye. Nke ahụ na-ewe oge na mgbe ọ dị, e degharịrị sayensị.
Mmechi 4 na-ekwu maka ịdị umeala n’obi karị na ịgwa onye ahụ okwu. Gịnị mere Mak ji kwuo banyere ya Church n'echiche ya? It nwere ihe o mere na ọ bụ theka? Maka ndị ahụ na-amata uru urcheska bara taa na ọtụtụ narị afọ gara aga, anyị niile kwesịrị ịmata na, site na mmejọ ya na amaghị eme, ,ka wuru ntọala nke ụlọ akwụkwọ anyị ugbu a. Dị ka Chka ndị nke gara aga, n’ọdịnihu anyị ga-achọpụta na anyị na-amụta ihe taa bụ ndị ọjọọ dịka ndị ọkà mmụta ọgụgụ isi anyị dere. Anyị kwesịrị ịdị umeala n’obi karịa.
Egwuregwu Gburugburu Ebe Obibi
Nke gbara ma ndọrọ ndọrọ ọchịchị na agụmakwụkwọ bụ nghọta anyị banyere Gburugburu. Mark na-ekwu okwu dị ka a ga-asị na ọ bụ amụma ọdịnihu na ụlọ ọrụ Mmanụ na-emebi gburugburu ebe obibi. Nke a na -denye aha 'ìgwè ehi'. N'ezie, enwere ọtụtụ enwere obi abụọ na obodo sayensị na nke a bụ ikpe ma ọlị.
Iwere akụkụ nke ọ bụla n'akụkụ ndị a kama ịmụ sayensị nke ọma n'azụ etu esi emetụta ha bụ nsogbu na ọ dị mkpa ka a nyochaa ya nke ọma dịka Mark na isiokwu ndị ọzọ dị n'akwụkwọ a. Ọzọkwa, achọpụtara m na akwụkwọ a bara oke uru - mana echere m na Mark nwere ike iji echiche ziri ezi na mpaghara nke ọ bụla wee nwee mmetụta karịa.
Tags: akwụkwọmgbanweìgwè ehiomume ehiìgwè ehiakara ntịomume uka
Obi ụtọ Bloggoween!
WordPress: Sochie Nchọgharị n'withntanet na Google Analytics
Nov 4, 2007 na 5:59 PM
Biko buru n'uche mgbe ị na-eche maka ihe atọ ndị a. A na-ebo ebubo ebubo atọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma nwee ike ime ka ị kpebie ịkwụsị ịgụ blọgụ m. Enweghị m olileanya!
Abụghị m onye na-akwado Bush, ọkachasị maka mbibi nke ikike iwu anyị. Mgbe anyị tufuru nnwere onwe dị ka nke a, ọ bụ nkwenye m na ndị na-eyi ọha egwu enweela mmeri.
Abụghị m onye na-akwado okpukpe a haziri ahazi - echeghị m na ị ga-ahụ otu amaokwu na Akwụkwọ Nsọ na-akpọ maka nnukwu urcheska ndị na-efu ọtụtụ nde dollar ma na-eme mkpọtụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mana ekwenyere m na Chọọchị na-eme nnukwu mgbanwe na ọha mmadụ. Ahụla m ihe dị iche na nke mbụ, nde kwuru nde na onyinye na-aga obodo na ndị chọrọ ha.
Adịghị m onye na-ahụ maka gburugburu ebe obibi, mana achọrọ m ịhụ ka anyị kwụsịrị ijupụta na ebe a na-ekpofu ala ma dabere na mba ndị ọzọ maka mmanụ anyị. Inyere gburugburu aka na-enyere aka n’ihe ndị ahụ, ya mere, m na-adaberekarị n’echiche ahụ.
Nov 5, 2007 na 9:05 AM
Ezigbo mma post, Doug. Achọpụtara m na anaghị m enwe ike ige ụfọdụ ndị na-ekwu okwu redio / TV ntị (ma n'aka nri ma n'aka ekpe) b / c ha enweghị ike ile anya n'akụkụ abụọ tupu ịme mkpebi. Ọ dị ka echiche na nyocha ewerela azụ iji mụta ihe ọmụma na ịwụli mkpebi na-adabere na mmetụta uche ndị anyị mejupụtara dabere na ahụmịhe anyị. Echere m na onye ọ bụla nọ n’ihu ọha, onye ọ bụla e nyere olu ọha na eze, ndị edemede, ndị editọ, akụkọ, anyị niile, ọbụlagodi blọgụ ahụ, nwere ọrụ dịịrị ọha na eze iweta arụmụka ndị ọzọ nwere ezi uche na ozi. Ọ bụghị mgbe niile ka m na-ekwenye, mana ana m eche na ị na-eme nke a nke ọma. Nke bu ya mere m ji gara n’iru igu ya. . .
A na echetakwara m oge na-adịbeghị anya banyere ihe m nụrụ mgbe m dị obere, sị, “Ihe niile n'imeru ihe oke. . . ”
Nov 4, 2007 na 10:49 PM
Doug, dị jụụ post. Maka onye nyocha ọzọ (ma ọ bụghị ọnụ ọgụgụ) lee ihe yiri nke ahụ, na-enweghị ogwe okpukpe na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, lelee "Amamihe nke igwe mmadụ" James Surowiecki. Ọ bụ otu n'ime ndị mbụ akwụkwọ na "amụma ahịa" nke bụghị kpọmkwem ihe Herd na-na, ma ọ bụ maa metụtara. Ihe bụ isi bụ na ị nwere ike ịtọlite ​​"ahịa" na, sịnụ, ntuli aka nke 2008 ma mee ka ndị mmadụ "zụta" nhọrọ nkwekọrịta maka onye ha chere ga-emeri. Ọ bụrụ na nsonaazụ ha merie, enwere ụdị ụgwọ. Ìgwè mmadụ ahụ mara ihe karịa ndị ọkachamara ọ bụla ma ọ bụ obere ìgwè ọ bụla ma nwee ike ịkọ amụma siri ike karịa ntuli aka. Enwere ọmụmụ na Univ. nke Iowa nke na-eme nke a maka ntuli aka onye isi ala ma echefuru m oge ọ ga - alaghachi, mana echeghị m na ha Agbaghara otu!